लेखाले सुन तस्करीे छानबिन गर्ने
काठमाडौं । संसदको लेखा समितिले सुन तस्करीको छानबिन गर्ने निर्णय गरेर अचम्ममा पारेको छ ।
अनुसन्धान गरेर रिपोर्ट दिने काम सुरक्षा निकायको हो । तर सुरक्षा निकाय तस्करसँग मिलोमतो गरेर सुन तस्करीमा सघाइरहेको भन्ने आशंकामा सुन तस्करी कसरी हुन्छ, तस्करी सुन कसरी कहाँ खपत हुन्छ, तस्करीको जालो र यसमा संलग्न व्यक्तिहरु कस्ता कस्ता रहेछन्, यी तमाम प्रश्नमा लेखा समितिले छानबिन गर्न लागेको हो ।
अर्को सवाल लेखा समितिले पत्ता लगाउन खोजेको कर्मचारी, सुरक्षा निकाय र तस्करका वीचमा कसरी सेटिङ मिल्ने र कसरी सुन तस्करी हुँदा वा सुन पक्राउ गरिदा कमिशनको चक्कर चलाइने रहेछ । यसमा पनि लेखा समितिले जान्न चाहेको छ ।
नेपाल आयल निगमले खरिद गरेको जग्गामा पनि संसदका ५ समितिले छानबिन गरे र भ्रष्टाचार भएकै हो भन्ने निष्कर्षमा पुगे । तर यस भ्रष्टाचारको नालीबेली संसदीय समितिले सार्वजनिक गरेनन् । त्यसैगरी लेखा समितिले सुन तस्करीको अनुसन्धान गरे पनि त्यसको विवरण सार्वजनिक गरेनन् भने के अर्थ रह्यो र ? लेखाको छानबिन त तस्कर र संलग्नलाई तर्साउने र तिनीहरुबाट दशैं खर्च निकाल्नका लागि धराप थापजस्तो भएन र ? यस्तै प्रश्न उठेका छन् यतिखेर । अनुसन्धान हुँदा पारदर्शी हुनु पर्दैन र ?